Ngaba i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi? UDe Telegraaf uneempendulo kuyo yonke imibuzo yakho! : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-11 Septemba 2019	• 12 Comments
Ungumntu onovelwano, uWilson Boldewijn, oko kwabonakala kwincoko endaba nayo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo (bona apha). Iingcuka ezambethe iigusha zihlala zijongeka njengezinye izimvu kwaye ngenxa yoko kubonakala ngathi akukho songelo. UWilson uqalise uthotho lweencwadi apho azigubungela zonke iithiyori eziphambili zokuba, ngokukaDe Telegraaf, ujikeleza. Uyayazisa inkosi ephikisayo, UGeorge van Houts, phambi kwekhamera, kunye noSilvan Schoonhoven, "intatheli yobugrogrisi" yeTelegraaf. Kuya kufuneka uyibone loo ndlela. Eminye isetyenziswa ngumqhekezi ukubonelela ngokubonakala kokugxekwa kwinyama ebhatywayo kwaye enye imele umgcini lowo; umthengisi ohlola eyakhe inyama.
Ithiyori zethamsanqa zingafumana inkxaso. Ngokuqinisekileyo ukuba ubasonta ngendlela yokuba babe nezindululo owaziyo kwangaphambili ukuba ungabakhonkotha phantsi kwinqanaba elizayo (ibhombu kwindawo ephantsi kabini). Ithiyori zethamsanqa zingakhula ngokuthandekayo ngesizathu esibalulekileyo. Eso sizathu sinokufumaneka kwinto yokuba zinxulunyaniswa 'neengcinga-ezinamaphiko' okanye 'iphiko lasekunene' (isiNgesi esithi 'ngasekunene'). Ukuba ungalinxibelelanisa iqela, ocinga njalo, kwibutho lezopolitiko kwaye uvumele naloo ntshukumo ukuba ibe semandleni emva koko ibangele uqoqosho luhle kakhulu, uya kuba ulisebenzisile lonke eli qela kunye nokugxeka okukodwa. .
Jonga ingxelo yeTelegraaf apha kwaye ufunde apha ngezantsi.
Siyayibona isenzeka e-US noDonald Trump nase-UK nentshukumo yeBrexit. EBrazil "lilungelo" Jair Bolsonaro nakwi-Yurophu iphela sabona ukunyuka ukusuka ekunene, kodwa ukutsalwa kolawulo lweshishini sele kuqhubeka (jonga nantsi inkcazo epheleleyo). Ungaqala ke ukukholelwa kumacebo enzonzobila; kuphela okanye kuloo nguqulo igqitywe ngamandla afanayo. Eyona ndlela ilungileyo yokugcina ukubambelela kwinkcaso kukuzilawula. Kungenxa yoko le nto ukhokhelwa kude kwindawo enje. Kungenxa yoko le nto igama lam lenziwe mnyama kwiiforamu nakuzo zonke iingxoxo zosasazo lwentlalo kunye nokutshiswa ziindima zikarhulumente (abasebenzi basekhaya kunye neefowuni emva kweeprofayili ezinzulu), ukuze ubhukude kumnatha wokhuseleko wenqanawa elawulwayo.
Ngapha koko, singatsho ukuba akusabalulekanga ukuba inyaniso malunga ne-911 iya kuze ivele ukukhanya. Ukuba awukholwa kwisithethi esisesikweni se-911, sele ubanjelwe kwiqela 'labacebisi babaqulunqi' kwaye udityaniswe nohlobo 'lokunene'. Ukuba kukho ingxaki enkulu kwaye ungayibeka ezicathulweni zamadoda angaphambili alolu hlobo (ukuba nguDonald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Thierry Baudet njalo njalo), ke lonke uluntu luyaligculela olo qela kwaye wonke umntu abe iqhutywa ukubuyela kwimithombo yeendaba ephambili kunye nokulandelwa kwezopolitiko zakudala. Ukuba intlekele enkulu iyeza, inokucaca kwabaninzi ngoku.
Ngokwenyani, xa ujikeleze i-911 ungatsho ukuba bekukho isizathu esaneleyo sokubeka iyelenqe, nokuba uSilvan Schoonhoven wenza konke okusemandleni akhe ukugoba ngqo. Ibali 'elasetyenziswayo lokuqhushumisa', nangona kunjalo, kubonakala ngathi le bhombu ikwindawo ephantsi yesibini yethiyori ye911. Ezinye iithiyori zisenokujongwa. I Inkcazo kaJudy Woods Isenokuvakala isengqiqweni kakhulu, kodwa naye ubonakala ephumeze indima yakhe ekubhukuqeni (ngakumbi) ingcaciso esekwe kwinyaniso. Ufuna nje umntu onje thuthuzela ngokungakhathali hlukana naye ugqibile. Ukukhutshwa kwefilimu ethi 'Loose Change' (njengoko kutshiwo nguWilson Boldewijn kwifilimu yetelegraph) ikwabonisa ngokucacileyo ukuba inkcaso iyonke ilawulwa njani ngamandla. Bahlala bakha kwiimpazamo zangabom ukuze bakwazi ukungalisebenzisi lonke ibali kamva.
Enye indlela yokuvusa inkcaso yayikwi2009. I-American 911 'inyani yokunyakaza' yayikhokelwa ikakhulu ngumntu ogama lingu-Ace Baker. U-Baker wayengoyena mntu ubenomdla we-911 'ofuna inyani' iminyaka. Wayevakala kwezinye iindlela zosasazo kwezinye iinkqubo zikanomathotholo. Kude kube ngoku uAce Baker wafika kumboniso kaJim Fetzer yokuzibulala (jonga ividiyo ngezantsi). Ubuncinci, leyo yayiyindlela yokuvakala ngenxa yompu, kodwa hayi emva kwexesha wavela waphila ukuba uyaphila kwaye ukhaba kwakhona.
Nanini na kuvela iithiyori zethamsanqa, njengakwimeko kaJudy Woods okanye abanye, kuya kufuneka uzibuze ukuba ngubani oxhasa ngemali lonke uphando. Awunakuyenza loo nto iphuma kwipokotho yakho. Kwaye nangawo onke loo madoda angaphambili, ekucaca ukuba anayo yonke imali kunye nezixhobo zokuxhasa umsebenzi wawo, ngoku siyazi ukuba uninzi lusebenzela ngasese umthengisi. Abanye abantu bangaphambili kwimithombo yeendaba esebenzayo (ekwabizwa ngokuba 'yintshukumo yenyani') bavunyelwe ukuzoba amagumbi agcwele abantu kangangeminyaka ukuze banxibelelane ngequbuliso, umzekelo, i-pedophilia.
Umzekelo olungileyo woku nguZen Gardner, owathi nge-2 wavela ngesiquphe kwiminyaka eyadlulayo njengenkokeli yokomoya kwihlelo labantwana bakaThixo. Wayengekho nje kwixesha elifutshane (umzekelo, unyaka). Hayi, wayeyi-XPNXX ye-XPUMX iminyaka. Unqulo lwaBantwana bakaThixo lwalusaziwa ngokukhuthaza nokwenza isondo kunye nabantwana abancinci kwimfundiso yabo. Yinto kancinci. Nangona kunjalo, abantu abanjengoWillem Felderhof kunye no-Ole Dammegard, abazalise iiholo, umzekelo, iinkomfa ze-Open Mind, bayaqhubeka nokumkhusela umntu ngesandla nangezinyo (jonga apha en apha). Siphila kwixesha apho inyaniso kunzima ukuyifumanisa kubantu abaqhelekileyo, ukuba kuphela kungenxa yayo yonke itekhnoloji ethengiswayo apha). Mhlawumbi ingxaki enkulu kukuba phantse yonke inkcaso ye-pawn ivela kwi-butcher. Nabani na omncinci onengqondo yokulima unokucinga ukuba i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi.
Funda ngaphakathi eli nqaku ukuba kuhamba njani kwezinto ezingasasetyenziswayo, kuba kubalulekile ukuba ufunde ukwenza umahluko.
Ingxoxo yefoni kunye noWilson Boldewijn waseDe Telegraaf: uchungechunge malunga neengcamango zobuqhetseba
Ikomidi yophando lwe-911 liqala icala malunga noorhulumente wase-US
UGeorge van Houts, ipaki kunye ne-clog yegolide njengethuseli ye-safety (i-plot bow 911)
Hlalana naye noMartin Vrijland kwi-Telegraaf.nl kunye noWilson Boldewijn (ividiyo)
Abadukisi, i-DWDD, uKajsa Ollongren kunye nephulo lokukhuthazwa kwe-AIVD kunye 'nokuhlola'
tags: 911, Bold wine, iqhinga, i-theory, iingcamango zobuqhetseba, lawulwa, George, Woods, ngaphakathi, uphawu, nenkcaso, iphiko lasekunene, USilvan Schoonhoven, telegraph, van, Wilson
11 Septemba 2019 kwi-21: 12
Ayinamsebenzi nokuba yenzeke njani.
Ukuba ufunda amakhonkco aluhlaza kwinqaku elingezantsi, uya kubuyiselwa kulo.
Ingxaki, ukusabela, isisombululo… ..
Mingaphi imigca ecinezelwe ngumqala wabantu emva kwe9 / 11. Ngubani oza kuxhamla kuloo nto? Kwaye ngaba iyangenelwa ngoku?
Ibhetri ukusuka kokudityaniswa ukuya thabatha incinci yeza kamnandi.
Ukongeza kwinto yokuba abahlali abaqhelekileyo (akukho CIA okanye i-AIVD) banokubukela iiyure ze-24, kufuneka babe zichanekile.
abasebenzi beenkonzo zokhuseleko bayakhangelwa, kuba soze wazi.
Yonke into yenziwa yangabikho manzi kwiinkcukacha zokugqibela.
Iinkonzo zokhuseleko azikaze zivume kuba zihlola ukuba zivuza na.
Jonga nje kwi-ofisi ese-Basisweg, iBoldewijn ayinakuze ivuza… (nangona kunjalo i-AT5 (amalungu e-AIVD esikolo akavumelekanga ukwenza njalo), Bhuti omkhulu 😉 ngqo kwabo bavuzayo!
11 Septemba 2019 kwi-23: 03
I-Telegraaf njengomthombo wolu hlobo lwengxwabangxwaba, kufanelekile ukuba singamangaliswa koko .. umdaniso wase-Israel owayesebenzela iMossad kwaye wabanjwa awakhankanywanga, igama likaDanny Jowenko alichazwanga okanye uphando lukaFox yena ngubani ibonise ukuba ngaxeshanye njengalo msebenzi babebaninzi abagxothi baka-Israeli kwi-radar ye-FBI .. Ewe, intlekele yaseBijlmer ayisathethwa, ngabadlali abafanayo?
abo banesibindi, i-schoonhoven kuya kufuneka idluliselwe 'intatheli', abahlohli bacacile kwaye kulula ..
12 Septemba 2019 kwi-15: 56
ukuba ucingo olusuka kwi-fox lusasebenza, kodwa akufuneki sihlale kuloo nto ixesha elide ... ngokomntu okhethiweyo
11 Septemba 2019 kwi-23: 13
U-Alan Sabrosky wathi kudliwanondlebe kwi-2010, ukuba ukuthandabuza kwakhe ibali le-9-11 elisemthethweni kwavuselelwa bubungqina bukaDanny Jowenko. USabrosky wayiphinda le nto kudliwanondlebe lukaJulayi 13th 2011.
Indawo yokusweleka kukaDanny Jowenko
Usweleke kwingozi yemoto enye kwindlela ethe ngqo kwilali yaseSerooskerke, eNetherlands, nge-16th kaJulayi 2011.
Ingxelo ka-Abreu icwangcise inqaku ngo-Matshi 02, 2016 9 / 11 Whistleblower Murdered on the Soil Dutch by US Intelligence.
15 Septemba 2019 kwi-14: 24
ixhaswa nje ngokwesayensi kunye nobungqina, kodwa awuyivanga itelegraph malunga naloo nto ..
12 Septemba 2019 kwi-08: 44
Ndisengomnye wabaphulukeneyo ababecinga ukuba bangazicingela bona. Ngoku ndihlala ndizama ukungacingi nto konke konke xa isenzeka, phakathi kwezinye izinto, ukufumana inyaniso. Ngoku ndiza kuthulula ingqondo yam rhoqo kwaye ndimeme amandla enyaniso ... Emva koko uya kufumanisa ukuba akukho nyaniso konke konke. Kodwa hamba uyokuchaza ukuba kwizivakalisi ezimbalwa kwaye yintoni ebalulekileyo?! Eyona nto ibalulekileyo kukuba amaxoki kaSathana ayazi ukuba ajongwe liqela elikhulu kakhulu laBantu BABE BEKHONA!
12 Septemba 2019 kwi-20: 11
Umahluko mkhulu phakathi "kwinyani" kunye "nenyani". Lo mahluko uthatha iindlela ezininzi kuluntu lwethu. Ndicinga ukuba ukuhamba ngebhayisikile yeyona eyaziwa kakhulu ngabantu abaninzi, kodwa siyaqhubeka ukuyamkela kwaye siyilandele. Kwiindawo zethu eziphakamileyo eziphantse zibe sisalathiso esihle sokubona ukuba bangahamba kangakanani na ngamanga abo.
13 Septemba 2019 kwi-15: 25
Unabantu abaninzi kunye nabantu abaninzi?! Ndingomnye wabantu abangasiqondiyo isikhundla sakho!
13 Septemba 2019 kwi-15: 33
Jonga phezulu ngoku ...
13 Septemba 2019 kwi-23: 57
Ukusasazwa kwi-28 kaJuni 2001….
14 Septemba 2019 kwi-12: 15
I-ZIO inkulu kakhulu ngaphezulu kwayo, kodwa abantu abakhulu bayayeka nje ukuba yenzeke ngaphandle kokuthatha uxanduva kwaye bahlala bexhomekeke kwipropaganda eqhelekileyo.
abarhanelwa abaqhelekileyo abakwazi nje ukwanela, bayaqhubeka ukuphathwa de bafumane ukukha ... kwaye ke bahlala
16 Septemba 2019 kwi-17: 01
manditsho nje ukuba ayisiyonto imbi kangako ngokuba nengqondo etyibilikayo yokuba 'bahluphekayo' emva koko ndithetha ngamava obuqu. Uninzi lwabantu aluyifuni ngaphandle kokuqonda into eyenzekayo, inkqubo ukusuka kubukhwe ukuya engcwabeni ingene nzulu
« I-US iyakuhlawula nini irhafu yemozulu kuzo zonke ezo bhombu baziphosayo?
Umnxeba ongxamisekileyo! Kufuneka sibeke imithombo yeendaba ngaphandle kokusebenza ngoku! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 32.170